Football Khabar » पोर्चुगलको कूल ह्याट्रिकमा रोनाल्डोको मात्रै ३० प्रतिशत !
पोर्चुगलको कूल ह्याट्रिकमा रोनाल्डोको मात्रै ३० प्रतिशत !
तीन दिनअघि युइएफए नेसन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सनसनीपूर्ण ह्याट्रिक गरे । स्वीट्जरल्यान्डलाई ३–० ले हराउनेक्रममा ३४ वर्षीय रोनाल्डोले पोर्चुगलका लागि ३ गोल गरेका थिए ।
सो खेलमा रोनाल्डोले गरेका ३ वटै गोल उत्तिकै शानदार थिए । जसमा एक गोल फ्रि किकबाट भएको थियो ।
सो ह्याट्रिक गरेसँगै यस वर्ष रोनाल्डोले क्लब र देशका लागि एक–एक ह्याट्रिक पूरा गरेका छन् । स्वीट्जरल्यान्डविरुद्ध उनले गरेको ह्याट्रिक उनको करिअरको ५३औं ह्याट्रिक थियो । जसमा उनले सात ह्याट्रिक भने पोर्चुगलका लागि गरेका छन्
रोनाल्डोले पोर्चुगलबाट खेल्दा उत्तरी आयरल्यान्ड, स्वीडेन, अर्मानिया, फारोए आइसल्यान्ड, स्पेन र स्वीट्जरल्यान्डविरुद्ध ह्याट्रिक गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा हालसम्म पोर्चुगलका सबै खेलाडीले समग्रमा कूल २३ ह्याट्रिक गरेका छन् । यो भनेको पोर्चुगलको फुटबल इतिहासमा सिनियर टिमबाट सबै खेलाडीले गरेको कूल ह्याट्रिक संख्या हो ।
कूल २३ ह्याट्रिकमध्ये रोनाल्डो एक्लैको नाममा सात ह्याट्रिक छ । यो प्रतिशतका हिसाबले कूल ह्याट्रिकको ३० प्रतिशत हो । अर्थात्, पोर्चगुलले गरेका कूल ह्याट्रिको ३० प्रतिशत ह्याट्रिक रोनाल्डो एक्लैको नाममा छ ।
रोनाल्डो समकालीन फुटबलमा सक्रिय खेलाडीमध्ये सबैभन्दा बढी ह्याट्रिक गर्ने खेलाडी हुन् । उनीपछि अर्जेन्टिनाका लिओनल मेस्सीको नाममा ५१ ह्याट्रिक छ ।
प्रकाशित मिति २५ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०६:३३